Ziziphi izizathu zokulibaziseka kwimihla?
Izizathu ezinokwenzeka zokubambezeleka kwenyanga
Yiyiphi ukulibaziseka kokuya esikhathini kunye nendlela yokujongana nayo? Sichaza kwinqaku.
Phantse wonke umfazi omdala wayenemizuzu enjalo xa iintsuku ezilinde ixesha elingazange lifike ngexesha elifanelekileyo. Emva koko amantombazana aqala ukuvakala i-alamu aze agijimele kwisikhululo seziyobisi esikufuphi sokuvavanya ukukhulelwa. Ngokukhawuleza ukuba ubukho bonyana kubomvu abukhutshwe, umfazi akanakho ukhetho kodwa ucinge ukuba yintoni isizathu esingaqhelekanga. Ukuze uqikelele kwi-chamomile, makhe sihlangabezane nento enokuyenza njengokulibazisa kwimihla kunye nendlela yokuphatha le syndrome.
Izinto ezibangela ukulibaziseka kwenyanga
Ukuba ukuhlolwa kokukhulelwa kubonisa umphumo ombi, ngoko kufuneka ucinge ngokucokisekileyo ngempilo yakho. Emva koko, ukuba awuyi kuqwalasela "imeko enomdla", ke ezi zibonakaliso zibonisa ukuba usuqhelile ukulinganisela kwe-hormonal, okanye inkqubo yokuvuvukala kwimizimba ye-pelvic yaqala.
Okokuqala, udinga ukutyelela ugqirha ukuze ufumane ukuxilongwa ngokuchanekileyo. Kwiimeko ezininzi, esi sifo sitholakala ngokuhlolwa ngokubonakalayo. Ngamanye amaxesha kufuneka udlulise i-ultrasound diagnostic okanye ukunikezelwa kweemvavanyo ze-hormone. Ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kuhlalutyo lwe-testosterone, ekubeni le hormone yesini iyakwazi ukuvimba umsebenzi weeyunithi, ngaloo ndlela ukuyeka ukuya esikhathini nokudala ukukhula kwe-cyst.
Kwakhona, umntu akufanele akhoxise isimo sakho sengqondo, njengoko uxinzelelo lwexesha elide kunye nokudakumba kunokubangela le syndrome. Yintoni endiyithethayo, umdlalo oqhelekileyo phambi kokuba uviwo okanye intlanganiso inokuthi ihlehlise ukufika kwe "le ntsuku" kwinyanga yonke. Ngako oko, zama ukuthabatha utywala ngexesha elincinci ngexesha lokuxhatshazwa okanye amava.
Kubalulekile kwakhona ukuba ugqoka njani kwindawo epholileyo okanye ebandayo. Ubumnandi bubuhle, kodwa inyaniso ebomini yobomi ibonisa ukuba amantombazana angenabantwana abancinci kakhulu. Ngoko ke, unganqikazi ukubeka i-pantyhose efudumele okanye i-leggings kwiqhwa. Nika iibhatyi ezingagubungela umva ongaphantsi, nangona zivela kwi-squeak yakamuva yefashoni.
Izindlela zokonyango kwexesha lokulibazisa ekhaya
Emva kokuba senze isigqibo malunga nezizathu ezibalulekileyo zokulibaziseka kokuya esikhathini, kungenakuchukumisa ukuthetha malunga nendlela le nkathazo esondele ngayo.
Isisombululo esihle kakhulu esinceda kunyango kunye nokukhusela izifo ezininzi zesibalo kukungena kwamanzi ngesisu. Inyaniso kukuba esi sityalo sinomlinganiselo omkhulu we-phytoestrogens (i-analogues yemvelo ye-hormone yebhinqa), ekwazi ukuphumelela ngempumelelo iinkqubo ezininzi zokuzala, kuquka le. Thatha njengemiyalelo.
Indlela yesibini yokonyango, ehlolwe sisizukulwana sikakhulukazi, ngumhluzi we-chamomile. Leli phephelo lilungelele ukuba isisombululo sokuya esikhathini sivuvukala amaqanda okanye iifowuni. Phuza le mhluzi rhoqo ekuseni ngesisu esingenalutho.
Kodwa ke, siyaxwayisa ukuba nayiphi na inyathelo kwimicimbi enxulumene nempilo ayikhuseli. Ngoko, okokuqala, ubhalisele ukuqeshana nomzimba wezintlu. Ukulahla kwesisu akusiyo isifo esizimeleyo, kodwa ukubonakaliswa kwesinye isifo, ngoko sincoma ukuba uyifumene ngokukhawuleza. Kwaye ekugqibeleni: zama ukucinga ngokucokisekileyo kwaye uncumo olungakumbi, kuba kuxhomekeke kwintlalo yethu!
Amabhati kunye notyuwa lolwandle ekulahlekeni kwesisindo
Ukuxilongwa kwezifo ezivuthayo zomgudu
7 iimpawu ezingabonakali zokuguga, ezinika ithuba lomfazi (njani ukuzifihla)
Ukusebenza ngokuqhelekileyo kwe-thyroid gland
Iimpawu zendalo yemveliso
Eyona nto ibhetele: ibhedi yokutshisa okanye i-shower epholile
Thrush: izizathu, iimpawu, unyango
Vasculitis - yintoni na? Iimpawu, iifoto, unyango
Ingakanani ukuhamba kunye nosana
IHoroscope yeAcarius ngoJanuwari
Isobho se-Strawberry puree
Indlela yokwenza umthandi omhle ngaphandle komntu
Iipilates, ukuqeqeshwa kwabaqalayo
Iingcebiso zengqondo zezengqondo: njani unokuzifunda
IRepe yeStrogan's Recipe
Izilwanyana zokukhanya eziphambili kwi-spring-summer 2016
Ziziphi iimpawu ezixela ukufa ngokukhawuleza komntu othandekayo
Iqoqo elitsha le-Camelia Solaire ubucwebe beChanel
Silahla amabala amhlophe ebusweni nangaphantsi kwamehlo
I-borsch ebomvu inetha
Ukunyamekela isikhumba esikhuniweyo
I-horoscope nganye ngosuku lokuzalwa